प्रकाशकीय : चितवन पोष्टको २३औँ पाइला – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
प्रकाशकीय : चितवन पोष्टको २३औँ पाइला
२०७६ पुष ९, बुधबार ०९:१६ गते
आज पुस ९ अर्थात् चितवन पोष्ट दैनिकको विशेष दिन । हामी आजदेखि २३औँ वसन्तमा पाइला टेक्दैछौँ । विसं २०५४ पुस ९ गतेदेखि साप्ताहिक पत्रिकाको रुपमा आरम्भ गरी २०५६ साउन १ गतेदेखि दैनिकको रुपमा चितवन पोष्ट अविरलरुपमा आफ्नो यात्रामा लम्किरहेको छ । मानिस शिशुका रुपमा जन्मिएर बाल्यकाल, किशोर हुँदै युवा बनेजस्तै चितवन पोष्ट दैनिक पनि हेर्दाहेर्दै युवा बनिसकेको छ । चितवन पोष्ट आरम्भ हुँदा देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था थियो । द्वन्द्वकालमै जन्मिएको यो संस्थाले पनि अनेकौँ आरोह–अवरोह, उतारचढाव, दुःखकष्ट, अभाव, कठिनाइ र संघर्षको सामना गर्नुप¥यो । त्यतिमात्रै होइन द्वन्द्वको नमीठा अनुभूति र पीडा यसले पनि भोग्नुप¥यो । तर, हामी कत्ति पनि विचलित नभईकन मानवजीवनमा आइपर्ने अनेकौँ समस्या र संघर्षसँग तुलना गरेर आफ्नो यात्रामा लम्किरह्यौँ । यसबीचमा देशमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्षदर्शी पनि हामी बन्यौँ । हामीले पनि केही हदसम्म लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सारथिको भूमिका निभायौँ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा साथ दिने पत्रकारिता जगत् भने अझै पनि प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संघर्षमै जुधिरहेको छ ।
नेपालमा व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिन सकेको छैन । पात्र परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन । पत्रकारिता जगत्को पनि संघर्षपश्चात् बनेको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरे पनि व्यावहारिकरुपमा पत्रकारिता क्षेत्र सुरक्षित बन्न सकेको छैन । राज्यले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अझै पनि राज्यका निकायबाटै प्रेसमाथि आक्रमण भइरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने गरी राज्यले भदौ १ देखि लागू गरेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ का प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको विषयमा पत्रकारहरुले निरन्तररुपमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । राज्यका विविध प्रतिकूलताबीच पनि चितवन पोष्टले सूचना र समाचारहरु पाठकहरुमाझ सम्प्रेषित गराउने अभिभारा पूरा गर्दै आएको छ । यसमा हामी खुसी छौँ । यद्यपि, हामीले आफ्नो अभिभारा पूरा गर्दै गर्दा पनि यस दैनिकका जन्मदाताहरु हामीमाझ नहुनुको पीडा र अभाव भने खट्किरहेको छ । संस्थापक सम्पादक स्व. धर्मराज अर्याल र संस्थापक प्रबन्ध सम्पादक स्व. जीवराज अर्यालको स्मरण गर्दै यसवर्ष पनि हामीले औपचारिक कार्यक्रमबिना वार्षिकोत्सव मनाउँदैछौँ । आज पाठकको हातमा रंगीन कलेवरको पत्रिका पस्किँदै गर्दा उहाँहरुले बोकेको सपना पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।
मानिसको मृत्यु अवश्यंभावी रहेको नमीठो तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै हाम्रा श्रद्धेय अभिभावकहरुको सोच र सपनालाई मूर्तरुप दिँदै निरन्तर सूचना र समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका छौँ । आमपाठक र विज्ञापनदाताहरुको विश्वास र सहयोगकै कारण हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । आज हामीले विगतकै पदचाप पछ्याउँदै ‘क’ वर्गमा वर्गीकृत हुन सफल भएका छौँ । सत्यतथ्य, खोजमूलक र समसामयिक घटनाक्रमहरु पस्किँदै हामी चितवन हुँदै नवलपरासी, मकवानपुर, धादिङ र तनहुँसम्म विस्तारित भइसकेका छौँ । राजधानीबाहेक प्रदेश नं ३ को प्रतिनिधिमूलक पत्रिकाको पहिचान बनाउन हामी सफल भएका छौँ । हामीप्रतिको विश्वास र भरोसाकै कारण आमपाठकको रोजाइको पत्रिकाका रुपमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी हर्षविभोर छौँ । पछिल्लो समय पत्रकारिता समाज रुपान्तरणको प्रमुख माध्यम बनेको छ । सामाजिक न्यायका लागि हामीले आवाजविहीनको आवाज बनाउनेतर्फ उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ । आगामी दिनहरुमा पनि सामाजिक मूल्यमान्यतालाई प्राथमिकतामा राख्दै देश र जनताको न्यायका लागि सधैँ समर्पित भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । हाम्रो यस अभियानमा सघाउने देशविदेशमा रहनुभएका पाठकवर्ग, लेखक, विज्ञापनदाता तथा समस्त शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ ।